एमसीसी पास नहुने देखेपछि जादाजादैं फातिमाले दिइन् यस्तो धम्की, अब के गर्लान् देउवा ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
एमसीसी पास नहुने देखेपछि जादाजादैं फातिमाले दिइन् यस्तो धम्की, अब के गर्लान् देउवा ?
नेपाल भ्रमणमा रहेकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाल सरकार र यहाँका राजनीतिक नेतृत्वलाई एमसीसीबारे यथाशीघ्र निर्णय लिन अप्रत्यक्ष दबाब दिनुभएको छ । उहाँको यो शैलीलाई धेरैले धम्की भनिरहनुभएको छ ।
एमसीसी सम्झौतालाई लिएर विवाद चर्किएको बेला नेपाल आएको फातिमा नेतृत्वको टोलीले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरुसँगको भेटमा एमसीसी छिटो टुंगो लगाउन कूटनीतिक दबाब बढाएको हो ।
उपाध्यक्ष फातिमाले एमसीसी अनुमोदन गराउन दबाब दिने उद्देश्यले नेपाल नआएको भने पनि ’छिटो निर्णय गर्न’ भन्नुले नेपाल पक्षलाई कूटनैतिक दबाब दिएको बुझ्न सकिन्छ । सबै भेटघाटमा टोलीले एमसीसी परियोजना सैन्य रणनीतिको अंग नभएको भन्दै अन्यथा नलिन आग्रह गर्नुले पनि नेपाललाई दबाब महसुस भएको छ ।
‘नेपाललाई नचाहिए यो सहयोग अरु देशलाई दिन्छौँ,’ फातिमाको उक्त अभिव्यक्तिलाई एमसीसी स्वीकार गर्न बाध्य पार्न खोजिएको अर्थमा पनि हेरिएको छ ।चार दिने औपचारिक भ्रमणका लागि बिहीबार बिहानै काठमाडौँ उत्रिएको एमसीसी टोलीले प्रमुख प्रतिपक्षदेखि सत्तापक्षका नेतालाई निवासमै पुगेर छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरेको थियो ।
बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट भेटवार्ताको शुरुवात गरेको टोलीले हिजो शनिबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर औपचारिक भेटघाटको बिट मारेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले एमसीसीका विषयमा राजनीतिकस्तरमा समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो । टोलीले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँग पनि मन्त्रालयमा पुगेर भेटघाट गरेको थियो ।
टोलीले अस्ति साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेको थियो । भेटमा उपाध्यक्ष फातिमाले एमसीसीलाई थप विवादित नबनाउन र स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे शीघ्र निर्णय लिन आग्रह गरेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गर्न सकेसम्मको प्रयास गर्ने जवाफ दिनुभएको बुझिएको छ ।
त्यसअघि अस्ति बिहान सत्ता गठबन्धनको अर्को ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग फातिमाले डेढ घण्टा लामो छलफल गर्नुभएको थियो । बताइएअनुसार प्रचण्डसँगको भेटमा पनि फातिमाले ‘जे गर्ने हो छिटो गर्नुस्’ आशयको भनाइ राख्नुभयो । प्रचण्डले भने राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र निर्णय गर्ने जवाफ दिनुभएको बताइन्छ ।
अस्ति पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल,जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव,पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईसँग पनि एमसीसी टोलीले भेटघाट गरेको थियो ।
सबै भेटघाटमा एमसीसीलाई संसदबाट शीघ्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजान टोलीले आग्रह गर्दै आएको छ । तर प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईबाहेक अरु कुनै पनि नेताले पनि प्रष्ट जवाफ नदिएको बताइएको छ । जनआस्थामा खबर छ ।